DRC: အင်္ဂါနေ့3စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: အင်္ဂါနေ့3စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
DRC: အင်္ဂါနေ့3စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
- အဆိုပါသတင်းကိုအင်္ဂါနေ့ကအတော်ကြာသည့်အကြောင်းအရာများကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားမျက်နှာ-to-မျက်နှာ-Tshisekedi Guterres နှင့်အမျိုးသားညီလာခံတွင်ဝန်ကြီးချုပ်၏တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပါဝင်သည်။
FORWARD မျက်နှာ-to-မျက်နှာ-Tshisekedi Guterres အပေါ်ခုထဲက။ ခေါင်းစဉ်: "ဟုအဆိုပါ DRC အတွက်လတ်ဆတ်တဲ့လေကိုရှု"။ နှစ်ခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထို့ကြောင့် MONUSCO (တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ကွန်ဂိုအတွက်ကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်) မြောက်ကီဗူ၏ Beni ဧရိယာ၌အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကနှင့်အကြမ်းဖက်သူကိုယူဂန်ဒါ ADF သူပုန်တွေကိုအရေးယူဘို့က၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုခိုင်ခံ့စေနိုင်သည်ကိုသဘောတူ "ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုလည်း MONUSCO နှင့် DRC ၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ (FARDC) အကြားကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသေချာပါလိမ့်မယ်: အရှေ့ပိုင်း DRC ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုသူဖြည့်စွက်, သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် "ပိုကောင်းတဲ့လူအများ၏လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကွန်ဂိုပေမယ့်တကယ်ပြီးသားနိုင်ငံတကာခြိမ်းခြောက်မှုသာသောဤခြိမ်းခြောက်မှုရင်ဆိုင်ရတွေ့ဆုံရန်။ " ခိုင်ခံ့စေ၏
"အန်တိုနီယို Guterres: မြေညီထပ်မှာရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက် souflle တစ်လေတိုက်", ခေါင်းစဉ်ဖိုရမ် DES ဟာ AS ။
Jai မြေညီထပ်မှာရှိတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့လေကိုရှုမွငျရ "သိသိသာသာကျေနပ်မှုကိုသမ္မတဖေလဇ်မင်း Tshsekedi အန်တိုနီယို Guterrres နှင့်အတူစည်းဝေးပြီးနောက်စတင်ခဲ့" အဆုံးစွန်သောအဘို့, ဘမ်းဆီးခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ "
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံအစီအစဉ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်များ၏တင်ပြချက်တွင်, "အမျိုးသားညီလာခံမတိုင်မီတွင်အင်္ဂါနေ့: ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ပါးစပ်စစ်ဆေးမှုများ", ခေါင်းစဉ် LE PHARE ။
အမျိုးသားရေးလွှတ်တော်အမတ်များအဘို့အလုပ်ဆောင်ချက်က၎င်း၏အစီအစဉ်၏တင်ဆက်မှုမျက်နှာစုံညီအတွက်ကိုစုဝေးစေဘို့ "ဟုခိုင်မာသောအစိုးရ 66 အဖွဲ့ဝင်များ၏ခေါင်းပေါ်မှာဝန်ကြီးချုပ် Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ကွန်ဂရက်၏ပြည်သူ့နန်းတော်၏ခန်းမ၌အင်္ဂါနေ့ 03 စက်တင်ဘာလမျှော်မှန်းထား ။ အဆိုပါခံတွင်းစာမေးပွဲမကြာမီ 12 နာရီအောက်ရှိအမျိုးသားညီလာခံ၏ရုံး၏သမ္မတ, Jeanine Mabunda က session ရဲ့အဖွင့်ပြီးနောက်အရပျကိုယူသင့်ပါတယ် "ဟုနေ့စဉ်ကပြောပါသည်။
နိယာမမှာတော့ LE PHARE အင်္ဂါနေ့ပေါ်တွင်မျက်နှာစုံညီစာသားနဲ့ပါလီမန်၏အောက်လွှတ်တော်၏အဖွဲ့ဝင်များတုံ့ပြန်မှုများ၏တင်ပြချက်ကန့်သတ်ထားရပါမည်ပြန်ပြောပြသည်။ အစဉ်အလာအရ, 48 နာရီကြာတဲ့ကာလရွေးကောက်တင်မြှောက်ကိုယ်စားလှယ်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ကအားပေးပြီးမှရပါမည်။
ယင်းအပေါ်အလေးပေးနှင့် ပတ်သက်. အကြံထမြောက်ရသောအ "လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အရေးပေါ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု - FCC သည်-cache: Lamuka ကုလသမဂ္ဂ၏ခုံသမာဓိအောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလိုအပ်ပြီး! "Lamuka အရှိဆုံးကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးတပ်ဖွဲ့များ (LAMUKA တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ကမ်းပေါ် FCC သည်-Cache ညွန့်ပေါင်း) တို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမြှင့်တင်ရန်ကုလသမဂ္ဂအကူအညီနဲ့ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ကအလွန်အရေးကြီးသည်စဉ်းစားအဘယ်ကြောင့်, ထိုင် အရပ်ဘက်ငြိမ်းချမ်းရေးထက်ဂဏန်းသင်္ချာပါလီမန်အများစု၏ဂိမ်းအဘို့နှင့်လူများတို့ကိုကျော်အစစ်အမှန်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲလိုအပ်သောရီပတ်ဘလီကန်များဆန္ဒဖြင့်ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ။ ဒါ့အပြင်မူလတန်းအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရပ်ကွက်ရွေးကောက်ပွဲအာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်အစဉ်အမြဲလူရဲ့အဆင့်အတန်းကို restore နှင့်ကွန်ဂိုအာဏာဖက်ရှင််အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲမယုံကြည်ကြဘူးရှောင်ရှားရန်, LAMUKA ကသိသိသာသာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှေ့ဆက်သယ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေ။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးသည် INEC, အသံ-Visual ၏ Superior ကောင်စီနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့်အခြားသော။
သို့တိုင်ဤဖိုရမ် DES ဟာ AS, ခေါင်းစဉ်: "ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲများသေချာစေရန်အလို့ငှာ, Lamuka အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတောင်းဆို"။ မူလတန်းအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရပ်ကွက်ရွေးကောက်ပွဲအာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုအတွက်အစဉ်အမြဲလူများကို restore နှင့်ကွန်ဂိုအာဏာဖက်ရှင််အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲမယုံကြည်ကြဘူးရှောင်ရှားရန်, LAMUKA, သိသိသာသာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ထွက်သယ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည် ယင်းသတင်းစာကဖော်ပြသည်။
လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အခွားသူမြားစှာအတှကျအခြေခံဥပဒေတရားရုံးသည် INEC, အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်များ၏ Superior ကောင်စီနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အမျိုးသားကော်မရှင်။ ဤရွေ့ကားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ကိုးကား. ကျနော်တို့ဖိုရမ် des အမျှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တာမှတ်စုတို၏ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူဖတ်, FORUM DES ဟာ AS ရေးသားခဲ့သည် "အတူတကွအရှိဆုံးကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုဆောင်ခဲ့တစ်ဦးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ပြုရပါမည် FRME ဒီပလက်ဖောင်း, အမည်ရ Pierre ၏ Lumbi: "ကျနော်တို့ကလိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်တဖက်သတ်ပြုသောအမှုမဖြစ်သင့်။ သူတို့ကကွန်ဂိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါငျးတို့သကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်။ "
Sylvie တွင် Meta
(SM / BT / ဟုတ်ကဲ့)
DRC: တနင်္လာနေ့2စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
Centrafrique : Ngaïssona et Yekatom coupables de crimes de guerre, selon la procureure de la CPI – JeuneAfrique.com
Aigle Azur : l’horizon se dégage mais l’atterrissage reste indéfini – JeuneAfrique.com
ကလူ - သင်္ဘောသားယောရှု Turner နှင့်အတူတစ်ဦးကဘတ်စ်ကားမတော်တဆစန်းလူး Obispo အနီးရှိလူတဦးသေဆုံး